मलेसियन रिंगट र साउदी रियाल बढ्यो, आज डलरको भाउ कति छ ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियन रिंगट र साउदी रियाल बढ्यो, आज डलरको भाउ कति छ ?
२९ वैशाख, काठमाडौं ।
आज एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १२३.८९ रुपैयाँ र खरिद दर १२३.२९ रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर तोक्दै डलरको खरिदबिक्री दर तोकेको हो । यसैगरी, एक यूरोको बिक्री दर १३०.८० रुपैयाँ र बिक्री दर १३०.१७ रुपैयाँ छ । यस्तै, पाउण्ड स्टर्लिङको बिक्री दर १५३.२३ रुपैयाँ र खरिद दर १५२.४९ रुपैयाँ छ । ८६.७७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको अष्ट्रेलियन डलरको खरिद ८६.३५ रुपैयाँ छ ।
यस्तै, सिंगापुर डलरको बिक्री दर ८९.४० रुपैयाँ र खरिद दर ८८.९७ रुपैयाँ छ । यता जापानी येनको बिक्री दर ९.५४ रुपैयाँ र खरिद मूल्य ९.५० रुपैयाँ छ । चिनियाँ युवानको बिक्री मूल्य १८.४३ रुपैयाँ र खरिद मूल्य १८.३४ रुपैयाँ छ ।
साउदी रियालको बिक्री मूल्य ३३.०३ रुपैयाँ र खरिद मूल्य ३२.८७ रुपैयाँ र कतारी रियालको बिक्री मूल्य ३३.९३ रुपैयाँ र खरिद मूल्य ३३.७६ रुपैयाँ छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को बिक्री मूल्य ३३.७३ रुपैयाँ र खरिद मूल्य ३३.५७ रुपैयाँ छ ।
यसैगरी, मलेसियन रिंगटको बिक्री दर २८.३१ रुपैयाँ र खिरिद मूल्य २८.१७ रुपैयाँ छ भने १०० कोरियन वनको बिक्री दर ९.७३ रुपैयाँ र खरिद दर ९.६८ रुपैयाँ छ ।